कसरी उत्कृष्ट थेसिस बिस्तृतरुपमा लेखिन्छ, रिसर्च प्रपोजल कसरी तयार पार्ने ? हेर्नुहोस «
कसरी उत्कृष्ट थेसिस बिस्तृतरुपमा लेखिन्छ, रिसर्च प्रपोजल कसरी तयार पार्ने ? हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १५:५३
त्यसपछि गणितको कुनै पाठ तपाईंको उद्देश्यअनुसार रोज्नुस् र दुवै थरीका कक्षामा पढाउन लगाउनुस् । एउटा समूहमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको गणित शिक्षकलाई पढाउन लगाउनुस् । अर्काे समूहमा १० वर्षभन्दा कम अनुभव भएका शिक्षकलाई पढाउन लगाउनुस् । पढाएको विषयवस्तुमा आधारित एउटा परीक्षा बनाउनुहोेस् । पढाइ सकिसकेपछि दुवै समूहमा विद्यार्थीको परीक्षण गर्नुहोेस् । कुन प्रकारको शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले बढी उपलब्धि हासिल गर्छन्, दुवैको नतिजा तुलना गरी निर्णय लिनुहोेस् । ती दुईबीच देखिएको अन्तर सिग्निफिकान्ट हो कि होइन भन्ने हेर्न भने टी टेस्ट वा अन्य कुनै स्टासटिकल इन्फ्रेन्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ । (एजुकेशन नेपाल, एजुसन्जाल, साझाप्रेस, तुवाचुङबाट जानकारीको लागी लिएको हो ।)